Nduzi na TV Plasma
Ụlọ ihe nkiri Ụlọ Echiche ndị dị oke
Ihe Plasma TV Basics
Atụmatụ Plasma Television na Atụmatụ Ịzụ Ihe
Igwe Plasma, dị ka LCD TV, bụ ụdị telivishọn dị elu. Otú ọ dị, ọ bụ ezie na n'èzí ma Plasma na LCD TV yiri nke yiri nke ahụ, n'ime, enwere ụfọdụ esemokwu dị ukwuu. Maka nyochaa ihe ị chọrọ ịma banyere telivishọn plasma, nakwa ụfọdụ aro ịzụrụ, lelee ntuziaka na-esonụ.
IHE: Ná ngwụsị afọ 2014, Panasonic, Samsung na LG niile mara ọkwa njedebe nke mmepụta Plasma TV. Otú ọ dị, a pụrụ ire TV Plasma site na njedebe na ụlọ ahịa ndị ọzọ ruo oge ụfọdụ, ya mere, a ga-eziga ozi ndị a na saịtị a maka ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme.
Kedu ihe bụ TV Plasma?
Samsung PN64H500 64-inch Plasma TV. Foto nye site n'aka Samsung
Teknụzụ Plasma TV dị ka nkà na ụzụ na-eji bọlbụ fluorescent.
Ngosipụta n'onwe ya nwere sel. N'ime sel ọ bụla, a na-ekewapụ abụọ mbadamba iko abụọ site na eriri dị warara nke a na-inye gas na-esote neon-xenon ma kaa ya n'ụdị plasma n'oge usoro nhazi.
A na-agbazi gas na ebubo eletrik n'oge etiti oge mgbe a na-eji Plasma setịpụ. Mmiri ahụ ebubo na-acha ọbara ọbara, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-acha anụnụ anụnụ, si otú ahụ na-emepụta ihe oyiyi TV.
A na-akpọ nke ọ bụla na-acha ọbara ọbara, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-acha anụnụ anụnụ pixel (ihe oyiyi).
Teknụzụ Plasma TV dị iche na nke onye bu ya ụzọ, omenala Cathode Ray Tube, ma ọ bụ CRT TV. A CRT bụ isi ihe na-eme ka ọ bụrụ nnukwu eriri igwe, nke na-esite n'otu ebe dị n'olu nke tube ahụ, na-enyocha ihu tube ahụ ngwa ngwa, nke, n'aka nke ya, na-acha ọbara ọbara, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ma ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ n'elu n'elu tube iji mepụta ihe oyiyi.
Ihe kachasị mma nke Plasma n'elu CRT technology bụ na, site n'iji cell emechiri emechi na plasma ebubo maka pixel ọ bụla, ọ dị mkpa ka a kpochapụ eletriki eletrik na-ekpochapu, nke, n'aka nke ya, na-ewepu mkpa maka nnukwu Cathode Ray Tube iji mepụta vidio ihe oyiyi. Nke a bụ ya mere e ji emepụta CRT TV ndị dịka igbe na TV Plasma dị ntakịrị ma dị mma.
Lelee akwụkwọ akụkọ nke Plasma Television
Ogologo Oge Ole Ka TV Ndị Ikpeazụ Pụrụ?
Plasma TV mbụ nwere ọkara ndụ nke ihe dị ka 30,000 awa. Otú ọ dị, n'ihi mmezi nkà na ụzụ ndị a na-eme na afọ ndị a, ọtụtụ plasma nwere 60,000 hour lifespans, na ụfọdụ setịpụrụ dị elu dị ka 100,000 awa.
Ihe a na - ekwu na ọ bụ na Plasma setịpụrụ ihe dị ka pasent 50 nke ìhè ya n'oge oge ya. Dabere na ọbụna obere oge nke 30,000, ma ọ bụrụ na Plasma TV dị otú a ruo awa asatọ n'ụbọchị, ọkara ndụ ya ga-abụ ihe dị ka afọ 9 - ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ bụrụ awa anọ n'ụbọchị, ọkara ndụ ga-adị ihe dịka 18 afọ (Ugboro abụọ na ọnụ ọgụgụ nke 60,000 nkeji ọkara).
Kaosinadị, na ụfọdụ nhazi ugbu a na 100,000 awa, nke a pụtara na ọ bụrụ na ị na-ekiri TV 6 awa n'ụbọchị, ị ga-enwe ahụmahụ na-ekiri nke ọma maka ihe dị ka afọ 40. Ọbụna n'elekere iri abụọ na anọ kwa ụbọchị, otu narị awa nkeji awa nke ndụ ka dị ihe dịka afọ iri.
Buru n'uche na, dịka ọ bụla na teknụzụ ọ bụla TV, igosi ihe dị iche iche gburugburu ebe obibi nwere ike imetụta, dị ka okpomọkụ, iru mmiri, wdg. Otú ọ dị, n'ọtụtụ okwu, Plasma TV nwere ike ịme ọtụtụ afọ nke nlele na-eju afọ.
Buru n'uche na telivishọn mara mma na-efunahụ pasent 30 nke ìhè ya mgbe ihe dịka awa 20,000 gasịrị. Ebe ọ bụ na usoro a dị nwayọọ nwayọọ, onye na-azụ na-amaghị mmetụta a, ma e wezụga maka mkpa ọ ga-agbanwe oge na-egbuke egbuke na iche iche iji kwụọ ụgwọ. Ọ bụ ezie na arụmọrụ nke TV Plasma ọ bụla nwere ike ịdịgasị iche, n'ozuzu ya, dị ka ngwaahịa, Plasma TV nwere ike ịnapụta ọtụtụ afọ nke nlele na-anabata.
Emere TV Plasma na-agba?
Mmiri dị na Plasma TV adịghị adaba n'ụzọ dị otú a nwere ike ịmalite ikpo ọkụ gasị. Nke ọ bụla pixel element bụ ihe mechiri emechi kpamkpam (nke a na-akpọ ya na cell), nke na-agụnye ikuku phosphor, na-ebugharị efere, na gas plasma. Ọ bụrụ na cell ada ada, enweghị ike idozi ya ma ọ bụ site na "ịghaghachi" gas. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na ọtụtụ mkpụrụ ndụ "na-agba ọchịchịrị" (maka ihe ọ bụla kpatara ya), a ghaghị dochie akụkụ ahụ dum.
Plasma TV Ọrụ A Pụrụ Ịdị Elu Dị Elu?
Ịbelata ikuku ikuku na-apụta n'ebe dị elu nwere ike ịbụ nsogbu maka TV plasma. Ebe ọ bụ na ihe pikselụ dị na TV plasma bụ n'ezie ihe eji ekpuchi ọkụ nke nwere gasị na-adịghị ahụkebe, ikuku dị elu na-eme ka nrụgide dị njọ na gas dị n'ime ụlọ. A na-ahazi ọtụtụ TV Plasma maka ịrụ ọrụ kachasị mma na, ma ọ bụ nso, ọnọdụ dị elu nke oké osimiri.
Ka elu na-abawanye, TV Plasma ga-arụsi ọrụ ike iji kwụọ ụgwọ maka ọdịiche dị na nrịgharị elu ikuku. N'ihi ya, setịpụrụ ahụ ga-eme ka ọkụ dịkwuo na ndị na-agbanye ọkụ (ma ọ bụrụ na ọ nwere ha) ga-arụsi ọrụ ike. Nke a nwere ike ime ka onye na-ere ya nụrụ "ụda mkpọtụ". Tụkwasị na nke a, a ga-ebelata obere mkpụrụ ndụ 30,000 ruo 60,000 (dabere na ika / nlereanya) nke ihuenyo Plasma.
Maka ọtụtụ ndị na-ere ahịa abụghị nke a, mana enwere echiche ma ọ bụrụ na ị bi na mpaghara 4,000 karịa elu mmiri. Ọ bụrụ na ị na-ebi na mpaghara 4,000 ft elele gị na-ere ahịa iji hụ ma enwere ike inwe nsogbu. Ụfọdụ TV Plasma dị ike iji rụọ ọrụ nke ọma na elu nke elu 5000 ụkwụ ma ọ bụ karịa (n'eziokwu, e nwere nsụgharị elu nke elu ụfọdụ nke TV plasma nwere ike ijide elu 8,000 ft).
Otu ụzọ iji chọpụta nke a, ọ bụrụ na ị bi n'ebe dị elu, bụ ịlele TV Plasma na onye na-ere gị na mpaghara gị. Mgbe ị nọ n'ebe ahụ, tinye aka gị na unit ahụ ma tụnyere ọkụ sitere na ọgbọ ọkụ ọzọ ma gee ntị maka ụda ụda akụkọ. Ọ bụrụ na ọ pụta na Plasma TV adịghị anabata na mpaghara mpaghara gị, ị nwere ike ịlele LCD TV kama. N'akụkụ dị mma nke mbipụta a, Plasma TV kwadoro maka ọkwa dị elu karịa ugbu a - ọbụlagodi na Plasma TV ga-adị.
Ndi TV Plasma Na-eme Ka Okpomọkụ Na-eme?
Ebe ọ bụ na a na-ebuba otu n'ime ihe ndị bụ isi nke Plasma TV gas, nhazi ahụ ga-ekpo ọkụ na aka mgbe ọ na-arụ ọrụ maka oge. Ebe ọ bụ na ọtụtụ TV Plasma bụ mgbidi ma ọ bụ guzosie ike, na ọtụtụ ntụgharị ikuku, ọgbọ ọkụ, n'okpuru ọnọdụ nkịtị, okpomọkụ anaghị abụkarị nsogbu (zoo ajụjụ gara aga n'iji elu mee ihe). Otú ọ dị, yana ọgbọ okpomọkụ, TV Plasma na-eji ike karịa otu CRT ma ọ bụ LCD.
Isi ihe bụ icheta iji nye Plasma TV ohere zuru oke iji kpochapụ okpomọkụ nke ọ na - eweta.
Kedu ihe dị n'ọdụ ụgbọ elu-ala na TV Plasma?
Mgbe ị na-ere ahịa maka Plasma Television, dịka ọ na-ejikarị ọtụtụ ngwaahịa ngwá electronic, ndị na-azụ ahịa na-ezute ọtụtụ ọnụ ọgụgụ na teknụzụ. Otu nkọwa nke dị iche na Plasma Television bụ ọnụego Sub-Field Drive, nke a na-ekwukarị dịka 480Hz, 550Hz, 600Hz, ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ yiri ya.
Chọpụta nkọwa nke ihe ụgbọ elu Sub-Field nọ na TV Plasma
Ndi HDTV niile TV Plasma?
Iji mee ka TV dị ka HDTV, ma ọ bụ HDTV-njikere , TV ga-enwe ike igosipụta na ọ dịkarịa ala 1024x768 pikselụ. Ufodu ihe omimi nke Plasma TV na-egosi 852x480. A na-akpọ ntọala ndị a dị ka EDTVs (Extended or Enhanced Definition TVs) ma ọ bụ ED-Plasmas.
EDTV nwere ihe mgbakwunye ntanetị nke 852x480 ma ọ bụ 1024x768. 852x480 na-anọchite anya 852 pikselụ gafee (aka ekpe gaa n'aka nri) na 480 pikselụ ala (n'elu ruo ala) na ihuenyo ihu. Ihe 480 pikselụ ala na-egosiputa ọnụọgụ nọmba (akara pixel) site na elu gaa na ala ihuenyo.
Ihe oyiyi ndị a na-ele anya dị ukwuu, karịsịa maka DVD na igwe dijitalụ dijitalụ, ma ọ bụghị ezi HDTV. Igwe Plasma nke nwere ike igosipụta akara HDTV n'ụzọ ziri ezi nwere mkpebi pixel nke dịkarịa ala 1280x720 ma ọ bụ karịa.
Ngosipụta mkpebi nke 852x480 na 1024x768 dị elu karịa TV, ma ọ bụghị mkpebi HDTV. 1024x768 na-abịa nso, n'ihi na ọ na-ezute ihe ndọtị ntanetị eletrik maka onyinyo dị elu, ma anaghị akwado nhazi usoro pixel juputara maka oyiyi zuru oke.
N'ihi ya, ụfọdụ ndị na-emepụta aha ha kpọrọ TV 1024x768 TV dịka EDTVs ma ọ bụ ED-Plasmas, ebe ndị ọzọ kpọrọ ha Plasma HDTV. Nke a bụ ebe ịchọrọ nkọwa dị mkpa. Ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo HD-ike Plasma TV, lelee maka akara nke pixel nke ma 1280x720 (720p), 1366x768, ma ọ bụ 1920x1080 (1080p) . Nke a ga-enye nkọwa zuru oke nke ihe omuma ihe dị elu.
Ebe ọ bụ na TV Plasma nwere ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke pikselụ (nke a na - akpọ ngosi ngosi-pixel), ntinye ntinye nke nwere mkpebi dị elu ga - abụrịrị atụle iji daa akara nchịkọta pixel nke ngosi ngosi Plasma. Dịka ọmụmaatụ, ụdị ọsọ ọsọ HDTV nke 1080i chọrọ igosipụta ngosi nke 1920x1080 pixel maka igosi ihe ngosi otu oyiyi nke HDTV.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na Plasma TV naanị nwere pixel ubi nke 1024x768, a ghaghị ịbaa mgbaàmà HDTV mbụ iji daa akara 1024x768 pixel na ihuenyo ihuenyo Plasma. Ya mere, ọ bụrụgodị na akpọsara Plasma TV dịka HDTV, ma ọ bụrụ na ọ nwere ihuenyo 1024x768 pikselụ pikselụ, ntinye akara ngosi HDTV ka ga-abawanye ala iji dabara ogwe pixel Plasma TV.
Site n'otu akaebe ahụ, ọ bụrụ na ị nwere EDTV na mkpebi 852x480, a ga - atụba akara ọ bụla HDTV iji daa ogige 852x480 pixel.
N'ihe atụ abụọ ahụ dị n'elu, mkpebi nke onyinyo a na-ele anya na ihuenyo adịghị adaba mgbe niile na mkpebi nke ihe mgbaàmà mbụ.
N'ikpeazụ, mgbe ị na-atụle ịzụ ahịa Plasma TV, jide n'aka na ị ga-elele ma ọ bụ EDTV ma ọ bụ HDTV. Ihe ka ukwuu n'egwuregwu TV Plasma ma ọ bụ 720p ma ọ bụ 1080p mkpebi nke ụmụ amaala, mana e nwere ihe ndị ọzọ. Ihe isi ihe ha na-eme bụ ihe mgbagwoju anya site na nnyefe mkpebi ntinye nke TV na-enweghị ike igosi akara ngosi pixel.
IHE: Ọ bụrụ na ị na-achọ Plasma TV nke nwere 4K nke amaokwu pixel, dị nnọọ na-agba ịnyịnya gị, naanị ndị e mere bụ nnukwu ntinye ihuenyo maka iji azụmahịa eme ihe.
Ụlọ ọrụ Plasma TV ọ ga-arụ ọrụ na My OldCRCR?
TV niile plasma eji eme ihe maka iji ihe eji eme ihe ga-arụ ọrụ na ihe ọ bụla dị na vidio dị na AV, vidiyo nke vidiyo, ma ọ bụ HDMI . Nanị akwụkwọ nchedo banyere iji ya mee ihe na VCR bụ na ebe ọ bụ na VHS dị oke ala ma ọ bụrụ na ọ dị njọ, ọ gaghị adị mma na nnukwu ihuenyo Plasma dịka ọ dị na TV dị nta karịa 27. , P> Iji nweta ihe kachasị na TV gị Plasma TV na-eji iji Blu-ray Disc Player, oyi akwa, ma ọ bụ Upscaling DVD dịka ọ dịkarịa ala otu n'ime isi mmalite gị.
Kedu ihe ọzọ Ị Chọrọ Iji Jiri Plasma TV?
Lee ụfọdụ aro na ihe ịkwesịrị itinye ego maka na mgbakwunye na TV gị Plasma iji jiri ya rụọ ọrụ ya niile:
Blu-ray Disc na / ma ọ bụ DVD (Upscaling ihe ọkpụkpọ DVD na-achọsi ike), VCR, egwuregwu egwuregwu vidio, satịlaịtị ma ọ bụ eriri USB, na onye mgbasa ozi . Tụkwasị na nke a, ụfọdụ TV Plasma ga-anakwere itinye aka na PC gị.
Egwuregwu dị mma. Ọ bụ ezie na ụfọdụ TV Plasma nwere usoro ụda n'ime ụlọ, ọ kachasị mma iji jikọọ ya na mmanya dị mma , ma ọ bụ ka mma, onye na- eme ihe ngosi ụlọ maka ezigbo obi ụtọ ụlọ.
Onye na-echekwa elu (nke bụ ezi ndụmọdụ maka ihe ọ bụla dị na sistemụ gị).
Njikọ njikọ iji jikọọ TV Plasma gị na ihe ndị ọzọ gị.
Plasma TV Ọ Dị Mma karịa Ụdị TV?
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na a kwụsịrị TV Plasma, ụfọdụ ndị ka na-eche na ha ka dị elu karịa ụdị TV ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ịnwere ike ịchọta otu, TV Plasma nwere ike ịhọrọ gị.
Plasma na LCD - Plasma na LCD (ma ọ bụ LED / LCD TV) bụ ụdị isi TV abụọ dịnụ. Ahụhụ na-aghọ aghụghọ mgbe ị na-atụle TV LCD na Plasma. Ụdị telivishọn abụọ ahụ dị nro ma dị njọ, a pụkwara itinye ya na mgbidi ma ọ bụ tinye ya na nguzo, ma jiri nkà na ụzụ dị iche iche na-enye nsonaazụ yiri ya.
Uru Plasma TV - Maka TV Plasma, uru karịa LCD, bụ: Ọdịiche dị iche iche, ikike dị mma iji mee ka mmiri dị omimi, mmirikiri dị omimi, na ntụgharị arụmụka kachasị mma nke na-ebelata trailing ma ọ bụ mmụba na ngwa ngwa ngwa ngwa.
Ihe ọghọm Plasma TV - Mmetụta dị na Plasma na LCD na-agụnye: Ọ bụghị dị ka ihe dịka LCD ma ọ bụ LED / LCD TV na-adịghị adị mma na ụlọ dị ọkụ, nke nwere ike ịmị ọkụ (ọ bụ ezie na nke a abụghị nke a ihe dị ugbu a, n'ihi mmụba nkà na ụzụ na afọ ndị na-adịbeghị anya, dịka "pixel orbiting"), ọgbọ ndị ọzọ, anaghị arụ ọrụ dị elu, na obere oge ngosi (ọ bụ ezie na nke a na-agbanwekwa n'ihi nkwalite nkà na ụzụ - ọtụtụ Plasma TV nwere 60,000 hour ma ọ bụ ogologo ndụ), ibu arọ, na ihe ndị siri ike iji ụgbọ mmiri.
Maka ozi ndị ọzọ na Plasma na LCD, gụọ isiokwu ibe anyị: Gịnị bụ Nhọrọ dị n'etiti na LCD na TV Plasma? na M Kwesịrị Ịzụta LCD ma ọ bụ TV Plasma? ,
4K, HDR, Ogwe ntụpọ, na OLED
Esemokwu dị iche n'etiti LCD na TV Plasma bụ mkpebi nke ndị na-eme TV mere iji mepụta teknụzụ ndị ọhụrụ, dị ka 4K ngosi ngosi , HDR , Wide Color Gamut, Teknụzụ Quantum Dot na LCD TVs, ọ bụghị na TV nke Plasma.
N'ihi ya, ọ bụ ezie na Plasma TV ga-echeta mgbe nile dị ka inye ezigbo mma oyiyi, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke LCD TV abatawo ogo arụmọrụ yiri nke ahụ.
Otú ọ dị, LCD TVs ka na-adabere na arụmọrụ ojii nke ọtụtụ Plasma TV, ma nkà na ụzụ ọzọ, nke a na-akpọ OLED abịawo na ọnọdụ ahụ ma ọ bụghị nanị na-enye LCD ọsọ maka ego ya n'ihe banyere arụ ọrụ ojii, ma maka ndị na-achọ ihe mgbatị kwesịrị ekwesị maka TV Plasma, OLED TV nwere ike ịhọrọ - ma ha dị ọnụ, ma na 2016, LG bụ naanị TV OLED TV na-ere ahịa na US.
Gụọ isiokwu anyị: OLED TV Basics maka nkọwa ndị ọzọ banyere nkà na ụzụ na ngwaahịa dịnụ.
Tupu ịzụta TV ọ bụla, tụnyere ụdị niile na nha nke dịnụ iji hụ ihe ga-arụ ọrụ kacha mma maka gị.
Jide n'aka na ihe oyiyi dị na ihuenyo dị gị mma.
Na-echebara otu ebe na ebe TV ga-eji mee ihe na otú ọ ga-esi daba n'ime ihe ndozi gị.
Tụlee ụgwọ ndị ọzọ iji bilie ma na-agba ọsọ, dị ka mgbakwunye nke ụda olu, ụda ntụrụndụ, ihe ndozi, na ihe ndị ọzọ.
Jide n'aka na ọ dị mfe iji.
Jide n'aka na TV na ihe niile ị chọrọ na ya dabara na mmefu ego gị ... echefukwala atụmatụ atụmatụ (karịsịa maka nnukwu ọnụ ọgụgụ ntanetị) nke onye na-ere ahịa nyere, ọ bụrụ na ọ bụ ...
Lelee ndepụta anyị nke TV Plasma nke nwere ike ka a na-eji ya ma ọ bụ na-adịghị mma
Njikọ Audio Analog Audio Multimedia - Ihe Ị Kwesịrị Ịma
Ụlọ Nche Ụlọ Ihe nkiri - Ihe Ị Kwesịrị Ịma
Ultra HD Blu-ray Format na Logo Finalized
Kedu ụlọ ụlọ ihe nkiri nke ụlọ na gịnị ka ọ na-emere m?
Ihe kpatara ekwesiri ịchọrọ ọnụ ọgụgụ na etiti ọwa dị na ya
Kedu ihe bụ TV na Ịntanetị?
Ndi niile LCD TVs nwekwara HDTVs?
Kedu ihe bụ PlayOn?
DTS-HD Master Audio - Ihe Ọ Na-enye Maka Ụlọ Ihe nkiri Ụlọ Gị
Nbudata Ntaneti efu na Google Video
Otu esi arụ ọrụ ihuenyo zuru ezu na Internet Explorer 11
Ngwa igwe di omimi nke 7 n'okpuru $ 200
Gbanwee ndabara Mozilla Thunderbird Message Font
Egwuregwu Egwú Egwú Egwu Mere maka gam akporo
Ihe ndekọ nke 7 kachasị mma ịzụta na 2018
Gbanyụọ Access Remote Na Windows XP
8 Egwuregwu Egwuregwu Onye ọ bụla Gamer Kwesịrị Ịdekọ
Kedu USB USB?
Esi jiri iTunes mee ihe dị ka Player Radio Player
Otu esi ejikọ na laptọọpụ gị na TV
Ihe mere ịkekọrịta ebe gị na Social Media bụ Ihe Ọjọọ
Esi Kwụsị Pop-Ups na Nchọgharị Ịntanetị gị
Ị nwere ike iji TV Analog?
PlayStation 4: Ihe Ị Kwesịrị Ịma
Esi achọta Mfc100u.dll achọtaghi ma ọ bụ njehie efu
Mụta ụzọ ziri ezi iji chekwaa Google Hangouts na Gmail Chat History
Bipute Bipute Email 3.0 Nyocha Ngwaọrụ
WhatsApp vs. Viber ozi
5 Best Payed Social Media Monitoring Tools